10 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha 2022
October 19, 2021 Adaeze Nwachukwu
10 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha
Carruurta Autism -ku waxay mudan yihiin kuwa ugu fiican, waana sababta aan u dhignay maqaalkan barnaamijyada autism ee ugu fiican dugsiyada dadweynaha. Waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad tixgelisid ku qoritaanka ilmahaaga ASD spectrum mid kasta oo ka mid ah dugsiyada.
Carruurta qabta cudurka autism waxay u baahan yihiin macallimiin dareen gaar ah waxaana laga heli karaa dugsiyada. Dugsiyada dawliga ahi waxay haystaan ​​ruqsad ay ku siiyaan adeegyo gaar ah carruurta qabta cudurka autism, si ay ula kulmaan calaamadaha cudurka, caafimaadka, iyo waxbarashada.
Ootiisamku wuxuu noqonayaa mid aad u sii kordhaya marka ay sannaduhu sii socdaan laakiin weli waxaa jira fikrado khaldan oo ku saabsan cudurka oo adkeynaya in la doorto dugsiga ugu fiican ee autism -ka ee cunugga autismka ah.
Waxaa la rumeysan yahay in gelinta ilmaha autism -ka ah ee dugsiga dadweynaha ay la timaaddo dib -u -dhacyo maxaa yeelay xoogaa way adag tahay in lala qabsado baahiyaha gaarka ah ee carruurta dhigata iskuul dawli ah, waxaa jira maqnaansho gaar ah oo ku saabsan baahiyaha ilmaha laakiin tani weli waa ma aha in la yiraahdo dugsiyada dadweynaha waa loo fasaxay carruurta la nool Naafada Autistic Spectrum (ASD).
Waxaa jira arrimo badan oo carruur u noqon kara carruurta autistic -ka ah taas oo adkeyneysa in loo oggolaado inay wax ku bartaan jawi waxbarasho dhaqameed sida carruurta kale. Carruurta qabta autism-ka waxay u taagan yihiin khatar sare oo ah in la handado marka loo eego carruurta caadiga ah sidaa darteed dugsiga ugu fiican ee ilmaha autism-ka ah ma aha kan ilmaha siiya waxbarashada ugu fiican, laakiin kan ilmaha lagu taageero akhlaaqda iyo niyadda.
Qaar ka mid ah adeegyada lagu bixiyo si guud dugsiga autism -ka wanaagsan ayaa ah sida soo socota:
Waxbarashada jimicsiga ee La -qabsiga
Waxaa jira barnaamijyo badan oo autism ah oo ka jira dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah midkoodna doorashada mid waxay ku xiran tahay doorbididda waalidka waxa u fiican ilmaha.
Ma sahlana in go'aan laga gaaro mar walba kiisaska iskuulka ee ilmaha autistic -ka ah laakiin dugsiyadan hoos lagu qeexay ayaa ah ikhtiyaarro kuu wanaagsan maxaa yeelay waxay ballanqaadaan barnaamijyada ugu fiican ee autism -ka ee dugsiyada dadweynaha.
1 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha
1.1 1. Akadeemiyadda barashada autismka
1.2 2. Dugsiga Gaarka ah ee Camp Hill
1.3 3. Akadeemiyada Beerta Dhulka
1.4 4. Akadeemiyada Albaabka Libaaxyada
1.5 5. Xarunta Guusha
1.6 6. Dugsiga Madasha
1.7 7. Dugsiga guga wadnaha
1.8 8. Bal qiyaas Akadeemiyada
1.9 9. Xarunta Carrie Brazer ee Autism-ka iyo Hababka Alternative, Inc., Miami
1.10 10. Dugsiga Jericho
Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha
Akademiyada barashada autismka
Dugsiga Gaarka ah ee Camp Hill
Akadeemiyada Beerta Dhulka
Dugsiga Spring Heart
Bal qiyaas Akademiyada
Akadeemiyada albaabka libaaxyada
Xarunta Carrie Brazer ee Ootiisamka iyo Hababka Kale, Inc., Miami
1. Akadeemiyadda barashada autismka
Akadeemiyadda barashada autism -ka waxay ku taal Toledo, Ohio.
Waxaa jira naafo kale oo lagu xannaaneeyo akadeemiyadda marka laga reebo Autism. Markaa, si uun, iskuulka waxaa loo arki karaa inuu yahay iskuul charter dadweyne oo dhan oo loogu talagalay dadka laga helay nooc kasta oo ah autism ama naafonimo haba yaraatee.
Akadeemiyada, waxaa ka jira bixinta xirfado xirfadeed oo ku filan, xirfadaha maareynta maalin kasta, iyo aasaas adag oo ku saabsan habdhaqanka iyo horumarka taas oo aad ugu baahan koritaanka ilmaha. Xooga saarida barashada tacliinta ee dugsigu waa mid aad u xoog badan oo ardayda si ku filan ayaa loo daryeelaa hareeraha.
Macallimiintu waxay xirfad u leeyihiin isdhexgalka wanaagsan ee ardayda waxayna fahmaan baahiyaha aasaasiga ah ee ilmo kasta sida xaalku noqon karo. Dugsigu waa mid ka mid ah dhowr dugsi oo bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autism ee Dugsiyada Dadweynaha. Waxaad booqan kartaa dugsiga website halkan.
2. Dugsiga Gaarka ah ee Camp Hill
Iskuulku wuxuu ku yaal Glenn Moore, Pennsylvania, USA. Waa dugsi weyn oo loogu talagalay carruurta autistic -ka ah iyo carruurta ku nool garashada iyo naafonimada korriin ee si dhow ula xiriira cudurka autism. Waxay leeyihiin xirfadlayaal ku xeel dheer tababbarka carruurta autistic -ka ah oo soo saara waxa ugu fiican.
Barnaamijyada deegaanka iyo maalinta ayaa laga heli karaa dugsiga iyo barnaamij ku meel gaar ah oo loogu talagalay dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 21.
Waxaa lagu taxay inay tahay mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee gaarka loo leeyahay ee ugu wanaagsan Mareykanka ee Masters ee Waxbarashada Gaarka ah. Dugsiga Gaarka ah ee Camp Hill waa u fudud yahay iskuulada ku yaal Mareykanka ee bixiya barnaamijyada ugu wanaagsan ee autism -ka ee dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo xitaa iskuulada dadweynaha. Macluumaad dheeraad ah ayaa si toos ah looga heli karaa Websaytka Dugsiga.
3. Akadeemiyada Beerta Dhulka
Land Park Academy waa mid ka mid ah dugsiyada bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autismka ee Dugsiyada Dadweynaha.
Waa barnaamij ku yaal Sacramento, California, kaas oo bixiya barnaamij waxbarasho oo heersare ah oo ku saabsan dhaqanka iyo horumarinta aadanaha ee dadka ku jira Autism Spectrum.
Waxay ka shaqeeyaan carruurta ay xanaaneeyaan si ay ugu diyaargaroobaan iskuulada dawliga ah ee caadiga ah iyagoo adeegsanaya dawooyin kala duwan iyo ujeedooyinka qorshaha waxbarashada shaqsiyeed (IEP). Khidmadaha waa kuwo la awoodi karo. Waxaa dhawaan loo taxay sidii ilo waxbarasho oo la aqoonsan yahay oo loogu talagalay carruurta la nool Autism-ka ee California.
Waxaa aad loogu kalsoon yahay in Lambarada Akadeemiyada Park Park ay ka mid tahay dugsiyada bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autism ee dugsiyada Dadweynaha. Waxaad booqan kartaa Websaytka Dugsiga halkan.
4. Akadeemiyada Albaabka Libaaxyada
Akadeemiyada albaabka Libaaxyada waxay bixisaa barnaamijyada ugu fiican ee Autism -ka ee dugsiyada Dadweynaha. Waxaa xusid mudan in la caawiyo ardayda ama carruurta qabta cudurka autism-ka oo aad u shaqeynaya si ay uga gudbaan caqabadaha xagga naafonimada korriinka iyo maskaxda.
Dugsigu waxa uu hore u lahaa in ka badan 45 dib u eegis oo ku saabsan darajooyinka Dugsiyada Weyn.
Waxay diyaarsadaan Qorshaha Waxbarashada Shakhsi ahaaneed (IEP) iyo Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (PLP) iyada oo loo marayo tallaabooyin wax-ku-ool ah oo u saamaxaya ardayda inay helaan waxbarasho adag oo ay weheliso xirfadaha nolosha dhabta ah si loogu isticmaalo dadaalkooda nololeed.
Dhibaatada doorashada dugsi wanaagsan oo autism ah aad ayay u badan tahay laakiin Lions gate si fudud ayaa loo go'aamin karaa dugsi ahaan bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autismka ee dugsiyada Dawladda. Raac xiriirkan si aad u booqato dugsiga website.
5. Xarunta Guusha
Tani waa mid ka mid ah dugsiyada bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autismka ee dugsiyada dadweynaha. Qaar ka mid ah waxa ay siiyaan ardayda waa mid degdeg ah oo dhammaystiran, waxbarid tacliimeed mid-ka-mid ah oo la siinayo carruurta u dhaxaysa saddex ilaa shan iyo toban sano.
Dugsigu wuxuu daryeelay inuu ku daro barnaamijyo waxtar u leh ardayda manhajka dugsiga. Waxaa jira waxqabadyo koox yar oo ka caawiya carruurta inay dhisaan xirfadaha bulshada iyo isgaarsiinta.
Heerka xirfadda ee macallimiinta iyo tababarayaashu waa kuwa ugu sarreeya oo carruurtu way ku faraxsan yihiin inta ay dugsiga joogaan. Booqasho School website halkan
6. Dugsiga Madasha
Dugsiga madasha ayaa asal ahaan loogu talagalay carruurta ku dhex nool baaxadda autism -ka. Waxay ku taal Waldwick, New Jersey.
Ma aha dugsi dawladeed, laakiin waa dugsi maalmeed gaar loo leeyahay, oo aan diin ahayn oo u diyaariya carruurta autism -ka dugsiga caadiga ah ee dadweynaha ama dugsiga dhaqanka ee ay doortaan. Waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahida carruurta ilaa 16 jirka ah.
Saamiga macallinka iyo ardaygu waa 1: 2 oo carruurta waxaa la siiyaa feejignaan dheeri ah iyadoo loo eegayo waxay u baahan yihiin horumarka dhinac walba ah. Manhajka waxaa loo diyaariyey si baahida shakhsiyeed ee ilmo kasta loogu daro qorshaha oo aan ilmo looga tagin halgan.
Faallooyinka ku yaal boggooda Facebook waxay muujinayaan wax ku -oolnimada dugsiga ee ku aaddan horumarka laga gaarayo boodhka iyo xuduudaha xagga xirfadaha bulshada, tacliinta, iyo nolosha. Booqasho School website halkan.
7. Dugsiga guga wadnaha
Dugsiga Spring Heart waxaa la aasaasay 1934 Wichita, Kansas, US. Waxaa aasaasay Connie Erbert, oo ah geesi abaalmarinta Autism -ka ku mutaysatay shaqadeeda waxbarasho ee naf -hurnimo ee bulshada autism -ka.
Waa mid ka mid ah dugsiyada bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autism ee Dugsiyada dadweynaha. Wax-barashada guga wadnaha Dugsiga waxaa ku jira barnaamijyo badan oo edbin ah oo ay ku takhasusaan si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay ugu adeegaan baahiyaha carruurta iyada oo loo marayo barnaamijyada waxbarashada ku salaysan fasalka iyo degaanka. Dugsiyada guga wadnaha waxay aqbalaan carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 21. Booqo School website halkan
8. Bal qiyaas Akadeemiyada
Koox waalidiin ah oo danaynaya ayaa isu yimid si ay u helaan Imagine Academy oo ku taal Brooklyn, New York. Waalidiintani waxay rabeen inay keenaan hab isku dhafan ee waxbarashada carruurtooda, sidaa darteed baahida loo qabo in la bilaabo akadeemiyad ay ku riyoodaan carruurtoodu nolosha.
Carruurta autism -ka qaba waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah iyo baahi waana tan dhab ahaan waxa ay Imagine Academy xoogga saartay markii ay aasaaseen Akadeemiyadda. Imagine Academy, cunug kasta baahidiisa shucuureed waa mid aad muhiim u ah waxaana loola dhaqmaa si degdeg ah.
Akadeemiyadu waxay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaystiran oo daryeela baahida carruurta. Ilmo kasta waxaa la siiyaa waxbarasho gaar ah oo degdeg ah iyo tababar ku saabsan qaybaha waxbarashada sida isdhexgalka dareenka, dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqa wanaagsan, daaweynta hadalka, dhisidda xirfadda bulshada, iyo tababbarro kale oo waxbarasho oo ku habboon geedi socodkooda horumarineed iyo caafimaadkooda.
Dugsigu wuxuu maalgelin ka helay Sanduuqa Fursadda Naafada oo ku tilmaamay “riyo rumowday” carruurta autismka ah iyo qoysaskooda. Booqasho School website halkan
9. Xarunta Carrie Brazer ee Autism-ka iyo Hababka Alternative, Inc., Miami
Barnaamijyada Autism-ka ee dugsiyada dadwaynaha waa naadir, marka la yiraahdo laakiin wali waa jiraan.
Kani waa mid ka mid ah dugsiyada aan faa'iido doonka ahayn iyo kuwa qaran ahaan loo aqoonsan yahay ee autism-ka ee Ameerika, si sax ah Miami. Dugsigu wuxuu u furan yahay ardayda dhigata dugsiga hoose, dhexe iyo sare oo siiya taageero weyn carruurta ku jirta baaxadda autism -ka.
Xaruntu waxay leedahay xirfadlayaal haysta ruqsadda daaweynta hadalka, daweynta shaqada, daaweynta jireed, iwm, barnaamijka waxaa loo qaabeeyey si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee ilmo kasta meelo kala duwan; baahiyaha koritaanka, waxbarashada, dareenka ee ilmaha.
Xaaladaha aadka u daran, xaruntu waxay siisaa carruurta fursadda 1: 1 xiriirka macallinka iyo ardayga. Carruurta machadka ayaa dareen ahaan la taageeray oo laga gaashaammay nooc kasta oo dhaawac maskaxeed ah, kaas oo ah mid ka mid ah dhibaatooyinka muhiimka ah ee carruurta ku dhex nool Sayniska Ootiisamka.
Xarunta Carrie Brazer ee Autism -ka iyo Hababka Beddelka ah, Inc., Miami ayaa si fudud u ah mid ka mid ah dugsiyada ugu wanaagsan ee bixiya barnaamijyada ugu wanaagsan ee Autism -ka ee dugsiyada Dadweynaha. Booqasho School website halkan.
10. Dugsiga Jericho
Waxaa aasaasay waalidiin iyo dad ganacsato ah oo ku nool Jacksonville, Florida. Si kastaba ha ahaatee ma aha iskuul dawladeed laakiin wuxuu u diyaariyaa carruurta iyo ardayda la nool cudurka autism dugsiga caadiga ah ee dadweynaha ama orda dugsi kasta oo ay doortaan.
Waa mid ka mid ah iskuulada ugu fiican autism -ka Mareykanka maxaa yeelay waxay bixisaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee autism ee iskuulada dadweynaha iyo iskuulada gaarka loo leeyahay. Dugsiga, waxaa ka jira bixinta fursado waxbarasho oo khaas ah oo sayniska ku salaysan oo loogu talagalay dadka autismka ah iyo cilladaha koritaanka dheeraadka ah.
Manhajku wuxuu oggol yahay dabacsanaanta ku darista falanqaynta habdhaqanka hadalka iyo dabaqadda (ABA) si ardayda loo siiyo waxbarid shaqsiyeed oo dhammaystiran.
Manhajka Jericho waxa uu ka caawiyay dhowr qof oo autism-ka qaba in ay ka gudbaan dhibaatooyinka ootiisabka ka dibna ay noqdaan kuwo waxtar leh oo ku faraxsan noloshooda kala duwan. Waa mid ka mid ah iskuulada Ameerika ee bixiya barnaamijyada ugu fiican ee autismka ee dugsiyada dadweynaha. Waxa jira in la heli karo Qorshe Waxbarasho Shakhsiyeed kaas oo ka caawiya ubadka in uu gaaro yoolal shaqsiyeed oo muhiim ah wakhtigan xaadirka ah iyo xitaa sanadaha soo socda. Booqasho School website halkan
Gobolkee leh iskuulada dadweynaha ee ugu fiican autism?
Waayahay, gobolladu waxay leeyihiin hab lagu caawiyo ilmo autism ah. Dawlado kala duwan ayaa bixiya wax badan ama ka yar marka loo eego ilaha iyo taageerada caymiska.
Waxaa jira arrimo badan oo waalidiintu u baahan yihiin inay tixgeliyaan ilmaha qaba Autism Spectrum Disorder (ASD), iyo doorashada degenaanshaha ayaa qayb muhiim ah ka ah tixgelinta, gaar ahaan Ameerika.
Waxaan ogaanay in gobollada hoos ku taxan ay ku habboon yihiin korinta ilmo autistic ah sababtoo ah ilaha la heli karo iyo dugsiyada laga heli karo gobolladan.
Dugsiyada Dadweynaha ma u fiican yihiin Autism -ka?
Dugsiyada Dadweynaha waxaa laga yaabaa inaysan ku fiicnayn barbaarinta cunug ku dhex nool Spectrum -ka Autism Sababtoo ah dhammaan faahfaahinta lagama maarmaanka ah iyo feejignaanta lagama yaabo in gebi ahaanba la diyaariyo si si buuxda looga caawiyo ilmaha inuu sare u qaado kartidiisa/keeda.
Dugsiyada dadweynaha, sida dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay siiyaan ilmo autistic ah goob waxbarasho iyo bulsho oo habboon. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inay jiraan xiriirro maqan oo caawinaya ilmaha. Ma jiro wax damaanad ah in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay ka fiican yihiin. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu hiigsanayaa inuu ka caawiyo ilmaha inuu ku koro meel kasta oo nolosha ah oo lagama maarmaan ah.
Waxaad ka eegi kartaa mowduucyadan hoose sidoo kale!
35+ Dugsiyada Ugu Fiican Autism -ka Shaqeeya Sare
8 Sababood Oo Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ka Barato Kala Duwanaanshaha Iyo Ka Mid Noqoshada
Kuleejka Niagara ee Mareykanka ee Caawinta Waxbarashada ee Kanada 2020
Previous Post:10 kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga
Post Next:15ka Dugsi Hoose Dhexe ee Ugu Fiican London